Powder kajongilanga-Umzi-mveliso woMenzi
Umgubo welanga (isiselo esiqinileyo) sisityebi kakhulu kwimixholo yeamino acid kunye nevithamin E, A, C emva kokutsalwa kunye ne-enzymolysis yebhayoloji. Umgubo kajongilanga (isiselo esiqinileyo) ubukhulu becala senziwe ziimolekyuli ezincinci ezinobunzima obungaphantsi kwe-1000u, ekulula ukufunxwa yimizimba yabantu kwaye inezinga eliphezulu lokusetyenziswa.
Ividiyo ye powder yesunflower
Ukucaciswa komgubo kajongilanga
Igama lemveliso Umgubo kajongilanga
Imveliso yobomi bakho Ayivuliwe iinyanga ezingama-24
umbala Mhlophe okanye mthubi mthubi
Sisibetho Tukushisa Gcina kubushushu begumbi kwaye kufuneka ibekwe kwindawo epholileyo neyomileyo.
Emva kokuvula, yitya ngokukhawuleza ukukhusela iimveliso ukufuma kunye agglomeration.
Aukuguquka Ukutya, ukhathalelo olusempilweni, ukutya okusebenzayo.
Yintoni umgubo kajongilanga?
I-sunflower powder (isiselo esiqinileyo) ifumaneka kwi-sunflower powder, kwiinkqubo ezininzi
njengokukhethwa kwezinto ezingavuthiweyo, ukukhutshwa, i-enzymolysis yebhayoloji, ukomisa kunye nokupakisha, njl.
Zithini izibonelelo zomgubo kajongilanga?
Inceda ukumisela i-uric acid kunye nokuphuculwa kwegawuthi
Uninzi lwamachiza asele ekho kunyango lwe-gout kunye ne-hyperuricemia ngamachiza amachiza, aneziphumo eziyityhefu kunye neziphumo ebezingalindelekanga. Ke ngoko, ngakumbi nangakumbi abaphandi bazibophelele ekufumaneni izinto ezisebenzayo zendalo ezinesiphumo sokunyanga kunye netyhefu esezantsi kwizityalo zendalo. Ngokokuqinisekiswa kweklinikhi yamayeza emveli kunye nophando lwekhemesti lwangoku, ujongilanga unemisebenzi eyahlukeneyo yeyeza. Kwisifundo sokukhupha ujongilanga, kwafunyaniswa ukuba isicatshulwa sikajongilanga sinciphisa umxholo we-asidi yeurric yegazi ukuya kwinqanaba elithile kwaye inefuthe elithile kuthintelo lomsebenzi wexanthine oxidase kwi-serum yegundane.
Fumana isifo esinganyangekiyo seprostatitis kunye neprostatic hyperplasiaed
Isifo esingapheliyo sesifo sesifo sesinye sezifo eziqhelekileyo phakathi kwamadoda amadala naphakathi. Uninzi lwezigulana zineempawu eziphambili njengokuchama okunzima, ukuvuza emva kokuchama kunye nokuqaqamba kwamalungu asezantsi. Ngokwengxelo zejenali yezonyango, inqanaba lokunyanga lifikelele kuma-80% phakathi kwezigulana ezili-100 ezichazwe apha ngasentla ezanyangwa ngomgubo weentyatyambo. I-Prostatic hyperplasia sisifo esinganyangekiyo esiqheleke ngakumbi kumadoda amadala, izehlo eziphakamileyo ngaphezulu kwe-75%. Emva kokuba abaguli betyile umgubo weentyatyambo, kukho isithintelo kwi-glandular hyperplasia, ukuncipha kwevolumu yegland, kunye nokuphuculwa komsebenzi wokumiselwa kwe-endocrine.
Fumana ukulungiswa kwesibindi kuphuculwe
Umungu weenyosi unefuthe elicacayo kwisifo sokudakumba esinxilisayo esibangelwa kukusela utywala ngokugqithisileyo, kunye nokulungisa ukusebenza kwesibindi ngokukhawuleza.
Iziphumo kwinkqubo yentliziyo
I-powder powder icebile kwiivithamini kunye nezinye i-flavonoids, ezineempembelelo ezilungileyo ekuphuculeni amandla e-capillary, kunye nokuthintela kunye nokunyanga kwe-capillary permeability disorder, i-cerebral hemorrhage, i-retinal hemorrhage, i-hypertension kunye ne-varicosity.
 Isifundo malunga ne-Anti-Gout kunye ne-Anti-hyperuricemia Umsebenzi weeNtloko zikaSunflower.
 Isondlo kunye nokhathalelo lwempilo ngenxa yomungu.
 Isishwankathelo sePollen Nutrition and Function.